अध्यक्ष दाहालले भने : ‘सरकारको नेतृत्व आलोपालो हुन्छ’ पटकपटक मेरो मुखबाट किन बोल्न लगाउनुहुन्छ ?
अध्यक्ष दाहालले भने : ‘सरकारको नेतृत्व आलोपालो हुन्छ’ पटकपटक मेरो मुखबाट किन बोल्न लगाउनुहुन्छ ? - Nepal Talk
काठमाडौं । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सरकारको नेतृत्व आलोपालो नै हुने बताएका छन्। पार्टी कामका सिलसिलामा बुधबार चितवन पुगेका अध्यक्ष प्रचण्डले भने, “सबै कुरा थाहा पाउनुभएकै छ। सहमतिअनुरूप हुन्छ। पटकपटक मेरो मुखबाट किन बोल्न लगाउनुहुन्छ ?” उनले पार्टीभित्र पर्याप्त छलफल नगरी विधेयकहरु ल्याइएकाले विरोधको सामना गर्नुपरेको बताए। “विधेयकका सन्दर्भमा तयारी राम्रो पुगेन। जति गृहकार्य भएर विधेयक आउनुपर्थ्यो,, त्यो नपुगेकै हो। सरकार, पार्टी यसमा सतर्क भएको छ,” उनले भने।
उनले तीन नम्बर प्रदेशको स्थायी मुकाम र नामाकरणका बारेमा पार्टीमा छलफल भइराखेको बताउँदै विभिन्न विकल्पमा छलफल भइरहेको बताए। “एउटा सोच के छ भने, जे पहिला निधो भयो, कमसेकम पाँच वर्षका लागि त्यहीँ कायम राखौँ कि भन्ने मत पनि छ, यसमा छलफल जारी छ,” उनले भने। पार्टीको जिल्ला इन्चार्ज, सहइन्चार्जलगायत कतिपय कार्यविभाजन अब प्याकेजमा टुंगो लगाइने उनले बताए। “विशेष कमिटी, जनसंगठनहरूको इन्चार्ज, सहइन्चार्ज, केन्द्रीय निकाय सबै एकैपटक प्याकेज नै सचिवालयमा प्रस्तुत गर्ने तयारी छ, प्रधानमन्त्री फर्किएपछि बैठक बसेर टुंग्याउँछौँ,” उनले भने।